Ikhaya Amasu we Forex Phezulu 5 Izindlela ezihamba phambili zokuhweba ngosuku lwe-Forex ezisebenzayo
Amasu Okuhweba Ngezinsuku Asebenza
1 Amasu Okuhweba Ngezinsuku Asebenza
2 I-Fratelli MACD Momentum Cross Forex Strategy Ukuhweba Isu
2.1 Isikhombi Sabazalwane seMACD
2.2 Momentum Inkomba
3 I-MACD Kijun Tenkan Forex Day Ukuhweba Isu
4 UJuun Tenkan
5 Isu Awesome Breakout Forex Day
5.1 Izindawo Zokuqhekeza
5.2 oscillator Awesome
6 I-Woodie CCI Trend Forex Day Ukuhweba Isu
6.3 Isu Lokuhweba
6.4 Thenga ukusethwa kwezohwebo
6.5 Thengisa ukusethwa kwezohwebo
7 Icebo Lokuhweba Amasu Okuhweba Signal Forex Day
7.1 Umkhondo we-BS
7.2 Imicibisholo kanye namajika
7.3 Isu Lokuhweba
7.4 Thenga ukusethwa kwezohwebo
7.5 Thengisa ukusethwa kwezohwebo
8 Amagama wokugcina
8.1 Imiyalo Yokufakwa Kwamasu Okuhweba Forex
8.2 Kunconywe Forex MetaTrader 4 Ipulatifomu Yokuhweba
8.3 Indlela yokufaka i-Top 5 Izindlela ezihamba phambili zokuhweba ngosuku lwe-Forex ezisebenzayo?
Ukuhweba ngezinsuku kungenye indlela enenzuzo yecebo lokuhweba. Empeleni, abathengisi abaningi abathola imali ngokuhweba imakethe ye-forex bangabathengisi bosuku.
Ukuhweba ngezinsuku kunezinzuzo eziningi. Inzuzo ekhazimula kakhulu yokuhweba kosuku ukusebenza kwayo ngempumelelo.
Ukuskena kuvame ukungasebenzi kahle uma kuqhathaniswa nokuhweba kosuku mayelana nezindleko zokuhweba. Ama-scalpers ajwayele ukuthola ama-pips ambalwa lapha nalaphaya kaningi ngosuku. Noma kunjalo, a 1 noma 2 izindleko zokuhweba ngamapayipi ekuhwebeni ngakunye kuyimali enkulu kulabo abasebenza ngezikweleti abazuza imali encane kakhulu kukho konke ukuhweba. Ngakolunye uhlangothi, abathengisi base-Swing ngeke banake izindleko zokuhweba ngoba bangahlose ukuthola ngaphezulu kwezikhulu kwikhulu konke ukuhweba. Noma kunjalo, bayaphuthelwa amathuba amaningi abanikezwe wona ngosuku lokuhweba olungangeza inzuzo enkulu ekuhambeni kwesikhathi.
Ukuhweba kosuku ngakolunye uhlangothi kusendaweni emnandi phakathi kwalaba bobabili. Ilawula ukulinganisa ukubaluleka kokugcina izindleko zokuhweba ziphansi uma kuqhathaniswa nezilinganiso ezivunwayo ngenkathi zisebenza ngenani lamathuba okuhweba avezwa ngosuku lokuhweba. Lesi mhlawumbe yisizathu esenza ukuthi abathengisi besikhathi esigcwele bathole imali yabo eningi njengomthengisi wosuku.
Uma unesikhathi sokuphumula ukuhweba izimakethe njengomthengisi wosuku, khona-ke lokhu kungaba kuwe. Sihlanganise amasu amahlanu okuhweba angakusiza uzuze ezimakethe ze-forex njengomthengisi wosuku.
I-Fratelli MACD Momentum Cross Forex Strategy Ukuhweba Isu
Ama-crossovers wesikhathi eside yisimo esithandekayo sokubukwa, ngisho nasezikhathi zokubekelwa ezingezansi. Lapho intengo ihamba eduze nendawo yomugqa ophakathi ojikelezayo omude, ukunyakaza kwentengo kuba mnandi.
Ngezikhathi, intengo izokwehla ngokuphelele endaweni yomkhuba wesikhathi eside. Yilapho abathengisi bebheka ukuthi intengo iyisaphulelo emakethe ehamba phambili, ngokwazi ukuthi intengo ithuthele ebangeni lentengo elijwayelekile.
Kwezinye izikhathi, ukunyakaza kwentengo kuzoba ukophula futhi ivolumu liphele. Kulesi simo, Iningi labathengisi lihlala eceleni. Lokhu kubangela ukuba ivolumu yehle futhi ngenxa yalokho kubangela noma yikuphi ukunyakaza kwamanani emizuzu kukhukhulwe kwishadi lentengo elibangela imvelo yemakethe ye-choppy.
Kwesinye isikhathi intengo ivele nje idlule ngaphezulu komugqa wesilinganiso esijikelezayo wesikhathi eside obonisa ukubuyela emuva kwesimo. Yilapho imakethe iqala ukubuyela emuva isekelwa ngumfutho onamandla ngemuva kokubuyela emuva. Lesi yisimo lapho abathengisi abahle kabusha benza imali.
Kepha singasho kanjani ukuthi ukuguqulwa kwesimo eside kwenzeka kwenzeka esikhundleni sokwehla kwentengo noma ukuba yinqola? Kukhomba umfutho nokuhlangana kwezimo okubonisa ukubuyela emuva kwesimo.
I-Fratelli MACD Momentum Cross Forex Day Ukuhweba Isu Isu lesikhathi eside lokubuyela emuva ngokusekelwe kumfutho. Inika amasiginali wokuhweba ekubuyiselweni kwesimilo sesikhathi eside ngokususelwa kuzinkomba ezisebenzisa kakhulu izinkomba zesikhathi esinokwethenjelwa.
Isikhombi Sabazalwane seMACD
Isikhombisi seFratelli MACD yisinkomba sesiko elenzelwa okusetshenziselwa ukuhambisa isilinganiso esimaphakathi nokusabalalisa (MACD).
Le nkomba i-oscillates ebangeni lamahhala nge-midpoint at zero. Ama-oscillates we-Fratelli MACD asuka ku-negative aye ku-positive nakokuphambene nalokho ngokuya ngokuqondisa kwenkambiso. Lezi zinkomba zikhonjiswa njengamachashazi. Amachashazi afanelekile ayimibala enemibala futhi akhombisa inkambiso ye-bullish. Ngakolunye uhlangothi amachashazi amabi ngakolunye uhlangothi angama-magenta anemibala futhi akhombisa ukuthambekela kwe-bearish.
Izimpawu ezithrendayo zenziwa njalo lapho amachashazi eshintsha imibala, okubonisa ukubuyela emuva kwesimo. Le nkomba ingaphinde isetshenziswe njengesikhombisi sendlela yenkomba yokusiza abahwebi ekuphumeni kwezohwebo ezingqubuzanayo nenkomba yamanje.
Isikhombisi se-Momentum siyikho ngqo ibizwa ngokuthi. Kuyinkomba yesikhashana esekelwe ekuhambeni kwamanani kusetshenziswa umehluko phakathi kokuvalwa kwekhandlela lamanje nekhandlela elisethwe ebangeni elithile ukusuka kukhandlela lamanje.
Lolu hlobo lwekhompiyutha lwenza inkomba ye-Momentum ibe yinkomba ehamba phambili. Yize ngabe akukho zinkomba empeleni ezihola ukunyakaza kwentengo, le nkomba ivame ukuba ne-lag encane kakhulu ngokuqhathaniswa nezinkomba eziningi zokulandela kanye nezinkomba zesikhashana.
Lesi sikhombisi sikhonjiswa njengesikhombisi se-oscillating esinomugqa ohamba uzungeza zero. Imigqa ye-Momentum evumayo ikhombisa umfutho we-bullish ngenkathi imigqa emincane yethonya ibonisa umfutho we-bearish. Ama-Crossovers from negative to good or vice versa can also be used as a signal reversal sign.
Lelisu elibuyisela emuva ngamandla lisuselwa ekunqamekweni kwentengo ngaphezulu kwesilinganiso se-Exponential Moving A average (UMAMA) umugqa.
I- 100 Umugqa we-EMA umele inkambiso yesikhathi eside. Intengo edlula phezu kwayo ngamandla iheha ukuhamba kancane ngoba kukhombisa ukubuyela emuva kwangempela kwendlela. Noma kunjalo, akuwona wonke ama-crossovers entengo kanye 100 I-EMA izophumela kwinzuzo.
Ukuhlunga okuhweba okungenzeka okuphansi, sizobe sisebenzisa inkomba ye-Fratelli MACD nenkomba ye-Momentum. I-crossover yentengo kanye 100 I-EMA kufanele ihambisane kakhulu nokuqanjwa kwamachashazi e-Fratelli MACD kanye nomugqa we-Momentum kusuka kokungalungile kuya kokuhle noma okuphambene nalokho..
Ngaphandle kwezimo ezingenhla, Amakhandlela okufaka okuhweba noma ikhandlela langaphambili kufanele liboniswe ngamakhandlela amakhulu agcwele ngomzimba nama-wick amancane. Lokhu kukhombisa ukuthi ikhandlela lokungena noma ikhandlela eliseduze linamandla.
Isikhathi esincanyelwayo: 5-umzuzu kanye namashadi wemizuzu engu-15
Amabili Wemali: ngababili abakhulu kuphela
Isikhathi Sokuhweba: Amaseshini aseLondon naseNew York
Intengo kufanele yeqe ngaphezulu kwe 100 Umugqa we-EMA.
Amachashazi we-Fratelli MACD kufanele awele ngaphezulu kwe-zero futhi kufanele abe ngu-lime obonisa ukubuyela emuva kwendlela ye-bullish.
Ulayini we-Momentum kufanele uwele ngaphezulu kwe-zero obonisa ukubuyela emuva kwendlela yesilinganiso.
Intengo kufanele yeqe ngezansi kwe 100 Umugqa we-EMA.
Amachashazi e-Fratelli MACD kufanele awele ngaphansi kwe-zero futhi kufanele abe yi-magenta ekhombisa ukubuyela emuva kwendlela ye-bearish.
Umugqa we-Momentum kufanele uwele ngaphansi kuka-zero obonisa ukubuyela emuva kwendlela ye-bearish.
Le ndlela yokuhweba iyisu elihle lokuhweba elisekela amandla.
Ukuthatha izibonakaliso zokuhweba ngokunqamula ngamandla 100 I-EMA ivame ukuphumela ekuhambeni kwentengo ngokuya kwicala lekhandlela. Lokhu kudalulwa kakhulu ngezikhathi ezingezansi ngoba iningi lamakhandlela amisiwe kulezi zikhathi zibangelwa ukuthengiselana okwenziwe ngabathengisi abakhulu bezikhungo.. Ukuthatha ukuhweba ohlangothini olufanayo njengabafana abakhulu kuvame umqondo omuhle.
Noma kunjalo, akuwona wonke ama-crossovers akhiqiza imiphumela emihle. Abanye bagcina bebuyiselwa emuva imakethe khona lapho. Leliasu linciphisa lezo zenzakalo ngokusebenzisa ukuguqulwa kwecosatu yentengo kanye 100 UMAMA, ikhandlela elincane, nezinkomba ezimbalwa zokwenza ngokwezifiso ezisekelweni ezinamandla. Lokhu kuthuthukisa kakhulu ukulindelwa kwaleli qhinga lokuhweba elisekwe ngamandla.
I-MACD Kijun Tenkan Forex Day Ukuhweba Isu
Ukubuyiselwa emuva komkhondo kuma-timeframes aphansi kungenye yezindlela ezinenzuzo kakhulu zamasu wokuhweba lapho kuthengiswa usuku. Izithelisi ezivela ekuguqukeni kwendlela yokusebenza evame ukuba mikhulu futhi ngokuhamba kwesikhathi, isilinganiso sobungozi bomvuzo sivame ukuba phezulu kakhulu. Lokhu kwenza amasu amaningi okubuyela emuva azuze inzuzo.
Kunezindlela eziningi zokuhweba emuva eziphambukayo. Abanye abathengisi basebenzisa amasu ashukumisayo we-crossover ahambayo, abanye badayisa besebenzisa amaphethini entengo eguqukayo, kanti abanye basebenzisa ukuqhekeka kweziteshi nezisekeli ze-diagonal nokumelana nazo.
Enye indlela yokuhlehlisa emuva kwethayela lokuhweba ukusetshenziswa kwezinkomba zobuchwepheshe ezilandelwayo zobuchwepheshe. Izinkomba eziningi zivame ukwehluleka lapho zisetshenziswa njengesinkomba se-standalone. Noma kunjalo, lapho izinkomba zenkambiso zigoqwa ngesibonisi esihambisanayo futhi zisebenza kususelwa ekuvumelaneni, amathuba ezentengiso athathwe ngcono kakhulu.
Leli su liyicebo lokubuyela emuva lesuselwa ekuvumelaneni kwezinkomba ezimbili eziphakeme zenkomba.
Inkomba yeJunun Tenkan iyinkomba yenkomba esekwe kwisikhombi se-Ichimoku Kinko Hyo noma i-Ichimoku Cloud.
Isikhombi se-Ichimoku Kinko Hyo ngesinye sezinkomba ezimbalwa ezingakhiqiza imiphumela emihle noma ngabe isetshenziswa njengesibonakaliso se-standalone. Ibona ukuqondiswa kwesitayela kusetshenziswa imigqa yokuthambekela eminingi. Yakhiwa iTenkan-sen (Umugqa wokuguqulwa), Kijun-sen (Umugqa wesisekelo), USenkou Span A no-B (Ukuhola Span A no-B), kanye neChikou Span (I-Lagging Span).
Ama-Tenkan-sen kanye neJijun-sen yimigqa yesiginali yokungena eyinhloko kwinkomba yefu le-Ichimoku. Le migqa imelela okufishane- nemikhuba yaphakathi nesikhathi isebenzisa i-Median yamanani entengo enqunyelwe ngaphambilini. Umugqa weTenkan-sen ususelwa entengo ephakathi nesikhathi esingamakhandlela ayisishiyagalolunye, ngenkathi i-Kijun-sen isuselwa emananini aphakathi nesikhathi esithile 26 amakhandlela.
Ukuqondiswa kwethrend kuncike ekutheni imigqa emibili ihlanganiswe kanjani. Izimpawu zokuhweba nazo zikhiqizwa noma nini lapho iTenkan-sen inqamula iJuun-sen, okubonisa ukubuyela emuva kwesimo.
I-Rads MACD iyinkomba yenkambiso eyenziwe ngokwezifiso ngokususelwa ku-Moving A average Convergence and Divergence (MACD).
I-MACD ibalwa ngokunquma umehluko phakathi kwemigqa emibili esethiwe esetshenziswayo ehamba phambili. Izimpawu zokuhweba zivele zikhiqizwe njalo lapho imigqa emibili evamile yokuhamba ihlangana, okwenza umugqa we-MACD ubuyisele emuva.
Isikhombi se-Rads MACD iyinkomba ye-oscillating eboniswe kusetshenziswa imigoqo ye-histogram. Amabha amahle akhombisa inkomba yendlela ye-bullish ngenkathi imigoqo engemihle ikhombisa inkomba yendlela ye-bearish. Amabha abuye futhi aguqule imibala ngokuya ngokuthi ibha yamanje inenani elikhulu ngokuqhathaniswa nebha yangaphambilini. Amabha anamanani amakhulu uma uqhathaniswa nebha yangaphambilini ungumbala we-lime, ngenkathi imigoqo enamanani amancane uma iqhathaniswa nebha yangaphambilini inombala obomvu.
Le ndlela yokuhweba ikhiqiza amasiginali wokuhweba asuselwa ekuvumeni kwezimpawu zokubuyela emuva kwezimpawu njengoba kukhonjisiwe yinkomba yeJunun Tenkan kanye nenkomba ye-Rads MACD.
Izimpawu zokuhweba zeJuun Tenkan zimane nje zisuselwa kumakhonkco emigqa yeTenkan neJyun. Ngenkathi kungumqondo omuhle ukuvumelanisa inkambiso yesikhathi eside kanye nemikhuba yesikhathi esifushane usebenzisa ezinye izinto zesikhombi se-Ichimoku Cloud, Izimpawu zokuhweba ezibandakanya imigqa ye-Senkou Span njengesihlungi zivame ukugcwala, okwenza ukuthi abathengisi babe nezithelo eziphansi uma kuqhathaniswa nezentengiso ezithathwe masisha lapho imigqa yeTenkan-sen neJunun sen sen.
Izimpawu ze-Rads MACD zimane nje zisekelwe ekunqamuleni kwemigoqo ye-histogram ngaphezulu kwe-midline. Lokhu kusebenza njengesiqinisekiso nokuvumelanisa nesiginali ekhishwe yinkomba yeJunun Tenkan.
Kijun Tenkan.ex4 (ukulungiselelwa okuzenzakalelayo)
Othandwayo Isikhathi Ozimele: 15-umzuzu namashadi wemizuzu engama-30
Amabili Wemali: ngababili abakhulu nabancane abanevolumu eyanele nokusabalala okuphansi
Ulayini kaTenkan (red) kufanele unqamule ngaphezulu komugqa weJuun (blue) okubonisa ukubuyela emuva kwendlela yokusebenza kwe-bullish.
Amabha we-Rads MACD kufanele awele ngaphezulu kwe-zero ekhombisa ukubuyela emuva kwendlela ye-bullish.
Setha ukulahleka kokumisa izikhwanyana ezimbalwa ngezansi komugqa weJuun.
Vala ukuhweba lapho nje intengo ivala ngaphansi komugqa weJunun.
Ulayini kaTenkan (red) kufanele uwele ngaphansi komugqa weJuun (blue) okubonisa ukubuyela emuva kwendlela ye-bearish.
Amabha we-Rads MACD kufanele awele ngaphansi zero okubonisa ukubuyela emuva kwendlela ye-bearish.
Setha ukulahleka kokumisa izikhwanyana ezimbalwa ngaphezulu komugqa weJunun.
Vala ukuhweba lapho nje intengo ivala ngenhla komugqa weJunun.
Le ndlela elula yokuhweba iyindlela ephezulu yesivuno.
Izinkambo ezithathwe ngesikhathi se-crossover yemigqa ka-Tenkan ne-Kijun okuholele ekuthambekeni kuvumela abathengisi ukuthi bathathe imisebenzi ephezulu yokuthengisa engathola ama-pips amaningi ngenkathi bezibeka engcupheni yokulahlekelwa okumbalwa. Lokhu kukhiqiza ukuthengiswa okuphezulu kokuthengisa kanye nokusetha okuphezulu komngcipheko wokuhweba okuyisilinganiso.
Yize ukuvumelanisa kuhweba nezinqubo zesikhathi eside ze-Ichimoku Cloud, okuyimigqa ye-Senkou Span, zivame ukukhiqiza ukuhweba ngamathuba angcono, kuvame ukudala ukuqubuka phakathi kwesiginali yokuhweba nokungena okungokoqobo, ngaleyo ndlela kunciphisa isilinganiso sengozi somvuzo. Kungalesi sizathu leli qhinga lifuna ukulahla imigqa yeSenkou Span.
Kunalokho, kwenza ukusetshenziswa kwesibonakaliso senkomba ye-Rads MACD ukukhombisa ukubuyela emuva kwesimo esijwayelekile ngoba inkomba ye-Rads MACD ithambekele ekuthandeni ukuthambekela kwesikhathi esijana. Ukuvumelanisa amasiginali weJunun Tenkan nezimpawu ze-Rads MACD kukhombisa ukubuyela emuva kwesimo eside nokujikisa okuncane ekungeneni.
Isu Awesome Breakout Forex Day
Amasu wokuphuka nawo ayindlela esebenzayo yokuhweba lapho kuthengiswa emini. Lezi zinhlobo zamasu zisebenza kahle kakhulu ekuqaleni kweseshini yokuhweba.
Lolu hlobo lwecebo lusebenza ngoba ekuqaleni kweseshini yokuhweba, abathengisi bezikhungo babevame ukuthatha izisetshenziswa komunye nomunye, belalele ibhokisi labo squawk, ibheka ibhidi futhi ubuze ukunyakaza kwentengo, futhi silinde umfutho ukuze wakhe. Ngokushesha nje lapho kususelwa inkomba ebonakalayo yosuku, abathengisi bezikhungo babevame ukuhamba nokuhamba kwemakethe. Abadayisi bezitolo njengathi abazi lutho ngabathengisi bezikhungo abanayo. Abanye abathengisi bavele basebenzise izinga lesibili noma ukujula kwemakethe ukubheka ibhidi futhi babuze ukuhamba kwamanani, kodwa ngenxa yobukhulu nevolumu yemakethe ye-forex, lokhu kubonakala kunzima kakhulu ukukusebenzisa ku-forex. Esikutholayo kumane nje kube ngamashadi entengo esikrinini sethu kanye namakhandlela alo, okuwumphumela walokho abathengisi bezikhungo abakwenzile.
Noma sisengozini uma siqhathaniswa nabadayisi bezikhungo, ishadi lentengo lingaphezulu kokulingene ngathi ukubona lokho okwenziwa ngabadayisi bezikhungo futhi basebenzise leyo mininingwane. Enye indlela yokwenza lokhu ukubheka ama-breakout aqhamuka kumaseshini adlule aphakeme futhi aphansi.
I-Awesome Breakout Forex Day Ukuhweba Isu kuyindlela yokuqhekeka esebenza kakhulu ekuqhekekeni kwamanani entengo ephakeme futhi ephansi esungulwe ngesikhathi sokuhweba okuthe ukuthula kwase-Australia..
Izindawo zokuqhekeza yisinkomba sokusekela nokumelana esiphawula ukwesekwa okuqondile nemigqa yokumelana ngokususelwa phezulu naphansi kweseshini yokuhweba.
Le nkomba imane ibambe inani eliphakeme kakhulu neliphansi phakathi kobubanzi besikhathi esethiwe futhi imaka imigqa yokusekelwa nokumelana nayo ngokususelwa kuyo. Lokhu kusekelwa nokuvundla okuvundayo kuyabe kugcinwa isikhathi sonke sesikhathi esilandelayo noma kuze kufike isikhathi sokugcina esethiwe salolo suku. Lokhu kwakha ibhokisi noma indawo ekhomba ububanzi besikhathi sangaphambilini.
Isikhombi se-Breakout Zones iyinkomba enhle kakhulu ongayisebenzisa ukusekela ovundlile kanye nohlobo lokuphuma kwecebo lokulwa.
I-Oscillator ye-Awesome iyinkomba yesikhashana yokuthi isiza abathengisi ekuboneni ukuqondiswa kwendlela yamanje.
Le nkomba ibala umehluko phakathi kwesilinganiso esingu-5 esilula sokuhambisa isilinganiso (Isikolo sebanga eliphezulu) kanye nesilinganiso se-Moving average esingu-34-elula (Isikolo sebanga eliphezulu). Lezi zindlela ezihambisayo azihambisani nokuvalwa kwamakhandlela kepha kunalokho kususelwa kwekhandlela ngalinye.
Lesi sikhombisi sikhombisa ukuqondiswa kwesiqhelo njenge-oscillator ephrinta imigoqo ye-histogram. Amabha amahle akhombisa inkambiso ye-bullish ngenkathi imigoqo engemihle ikhombisa inkambiso ye-bearish. Amabha abuye futhi aguqule imibala ngokuya ngokuthi ibha yamanje inenani elikhulu ngokuqhathaniswa nebha yangaphambilini. Amabha aluhlaza abonisa inani elikhulu ngokuqhathaniswa nebha yangaphambilini, ngenkathi imigoqo ebomvu ikhombisa inani elincane kuqhathaniswa nebha yangaphambilini. In an uptrend, imigoqo eluhlaza ikhombisa umfutho wokuqina oqinisayo, ngenkathi downtrend, imigoqo ebomvu ikhombisa umfutho wokuqina oqinisayo.
Leliqhinga lokuqhekeka lisuselwa kokuphezulu nokuphansi kwamanani asungulwe ngesikhathi kuvulwa i-Australia. Imakethe ibuye ibhekwe ukuze kuqhutshekwe nokuqhuma okungatheni ezinhlelweni eziseTokyo naseLondon.
I-Australia evulekile kungenzeka ukuthi iyiseshini yokuthengisa ebanzi kunazo zonke. Ngalesi sikhathi, kuphela i-AUD ne-NZD ngababili abanomthamo. Ukuqondiswa kwemakethe kwezezimali eziningi kuvame ukuqalwa ngesikhathi seseshini yeTokyo futhi kuqhubeke noma kubuyelwe emuva ngesikhathi seLondon.
Ukuhweba leli su, kufanele sikhombe amakhandlela amakhulu aphuma ngamandla ngaphandle kwendawo emakwe inkomba Yezindawo Zokuphuka.
I-Momentum ibuye iqinisekiswe ngokususelwa ku-Acome Oscillator. Lokhu kuzobe kususelwa ekuqondisweni komkhuba njengoba kuboniswe ngamabha we-histogram, kanye nombala wemigoqo.
Uma imigomo engenhla iqinisekisiwe, khona-ke umyalo wokungena wokumiswa ubekwa phezulu noma phansi kwekhandlela lokuqhuma. Inkomba yokuthatha inzuzo ihle ibekwe kabini engcupheni yokulahleka kokuma. Ama-trimes angavalwa ekugcineni kweseshini lapho ukuhweba kuvulwa noma ngaphambi kokuvulwa kwemakethe elandelayo.
iziqeshana zokuphuma.ex4 (izilungiselelo ezizenzakalelayo)
Amabili Wemali: JPY, I-GBP ne-EUR ngababili ngaphandle kwe-AUD ne-NZD ngababili
Isikhathi Sokuhweba: ITokyo neLondon kuvulekile
Bheka amakhandlela ahlukanisayo kusukela ekuqaleni kweTokyo kuya engxenyeni yokuqala yeLondon evulekile.
Ikhandlela elincane kakhulu le-bullish kufanele liphule ngaphezulu komugqa wokumelana njengoba kukhonjiswe Inkomba Yezindawo Zokuphuka.
I-Oscillator ye-Awesome kufanele ibe iphrinta imigoqo eluhlaza eluhlaza ekhombisa ukuthambekela kwe-bullish ngomfutho owandayo.
Setha i-oda lokumisa phezulu kwekhandlela elivelayo eliphumelelayo.
Lindela intengo ukuthi iphule ngaphezulu kwekhandlela lesikhashana.
Setha ukulahleka kokuma maphakathi nebanga njengoba kukhonjiswe Inkomba Yezindawo Zokuphuka.
Ikhandlela elincane le-bearish kufanele liphule ngaphansi komugqa wokusekela njengoba kukhonjisiwe Inkomba Yezindawo Zokuphuka.
I-Oscillator ye-Awesome kufanele iphrinte imigoqo ebomvu engemihle ekhombisa ukuthambekela kwe-bearish ngokuqina okukhulu.
Setha i-oda lokumisa ngaphansi kwekhandlela lokuqhuma okungatheni.
Lindela intengo ukuthi iphule ngaphansi kwekhandlela lesikhashana.
Leli isu lokuqhekeka elisebenzayo elingasetshenziswa noma yimuphi umhwebi njengecebo lokuhweba ngosuku.
Leli su lisebenzisa ibanga lesikhathi sase-Australia ukuvumela uhla oluqinile nokuvumela ukuthengiswa ngesikhathi kuvulwa iTokyo neLondon.
Okunye ukwahluka okudumile kwaleli su ukusetha uhla olususelwa kuseshini yeTokyo futhi ukuhweba kuthathwa kuphela ngenkathi kuvulwa iLondon. Lokhu kuvumela ukwahlukana okuqine kakhulu ngoba ukuvulwa kweLondon kubalwa ngevolumu ephezulu namandla. Noma kunjalo, futhi kunciphisa inani lamathuba okuhweba ngoba kuphela iwindi elingamahora amathathu kungaba yisikhathi esivumayo sokuvula umsebenzi.
Abanye abathengisi baphinde bakhethe ukungathathi imigomo yenzuzo futhi basebenzise kuphela izitobha zomkhondo uma besebenzisa lelo su. Lokhu kuzokwenza isu lisizakale kakhulu, kepha kudinga isiyalo ukuhweba ngale ndlela.
Icebo Lokuhweba Amasu Okuhweba Signal Forex Day
Enye yezinto ezibalulekile okufanele uzibheke lapho ukuhweba amandla e-trend. Ukwazi ukuthi yiziphi izinhlobo zezimali namaringi wemali athambekele ngokunamandla kunikeza abathengisi inzuzo ehlukile.
Amandla omkhuba avame ukuhlotshaniswa namandla. Abahwebi abangakhomba ukuthi yimaphi amabhangqa emali athambekele ngamandla amakhulu abavumela ukuthi bathengise ngohlobo lwemali olubanikeza ithuba elihle lokuthola inzuzo.
Hhayi lokho kuphela, izitayela ezinamandla amakhulu nazo zivame ukuhamba ngokuqinile endaweni eyodwa. Lokhu kuvumela abathengisi ukuthi bathole isivuno esikhulu ekuthengisweni ngakunye okuzuzayo. Lokhu kuvumela ukuhlanganiswa okuhlukile kwesilinganiso sokuwina esihle kanye nesilinganiso sengozi ephezulu.
Kunezindlela eziningi zokubona amandla wethayela. Abanye basebenzisa izilinganiso zokuhambisa eziningi ukubona amandla womkhuba. Abanye basebenzisa ukuhlangana kwemali ngohlobo lokuhlukanisa imali eqinile kusuka ezinhlakeni ezibuthakathaka. Abanye basebenzisa izinkomba ezahlukahlukene ukukala amandla enkambiso.
I-Trend Strength Signal Forex Day Ukuhweba Isu lisebenzisa izinkomba ezilinganisa umfutho ukukhomba ubhangqa lwemali ngomfutho oqinile. Lokhu kuvumela abathengisi ukuthi bakhombe izimakethe namabili ngokufanelekile okuhweba kusuka kubabili lwemali abanamathuba aphansi okuwina.
Isikhombisi se-BS Trend siyinkomba yesikhathi esisiza ukukhomba indlela yothambekela.
Kukala amandla ezinkabi namabhere emakethe ngokususelwa ku-Indative Powerth Inkomba (I-RSI). Ibuye ikhombe ukuqondisa kwenkambiso ngokubonisa imigoqo ewindini elihlukile. Lezi zibha ngandlela-thile kanambambili. Amabha noma + 0.0001 noma – 0.0001. Amabha amahle akhombisa inkambiso ye-bullish ngenkathi imigoqo engemihle ikhombisa inkambiso ye-bearish.
Isikhombisi se-BS Trend siyindlela yokuhlunga enhle kakhulu esiza abathengisi ukubona uma isibonakaliso sokuhweba esenziwe ngokusekelwe kwezinye izici sihambisana nokuqondiswa komfutho. Kungaba ukungena okuhle noma ukuphuma okudala njengoba nakho kusabela kakhulu ekushintsheni kwesitayela.
Imicibisholo kanye namajika
I-Arrows ne-Curves kungenye inkomba yemikhuba esekwe ngamandla.
Ihlanganiswe nebhendi engenhla nephansi. Indawo ephakathi kwamabhande ikhombisa uhla olujwayelekile lokuguquguquka kwentengo yamanje. Intengo ehamba ngamabhendi ibhekwa njengomfutho onamandla. Izimpawu zokungena zikhiqizwa noma nini lapho ikhandlela livalela ngaphaya kwamabhanti aphezulu nangaphansi. Inkomba ivele inyathele umcibisholo okhomba indlela eya ngasosonke isikhathi lapho ithola isinali lokungena.
Leliqhinga lokuhweba linikeza amasiginali wokuhweba asuselwa kumandla esikhashana.
Amathrekhi ayahlungwa ngokususelwa enkombeni ejwayelekile yenkomba njengoba kukhonjiswe Isilinganiso Esijwayelekile se-50 Moving A average (Isikolo sebanga eliphezulu). Ukuqondiswa komkhondo kususelwa endaweni yentengo maqondana ne- 50 Isikolo sebanga eliphezulu, kanye nokuthambekela kwe 50 Isikolo sebanga eliphezulu.
Izimpawu zezentengiso bese zibhekwa noma nini lapho inkomba ye-BS Trend kanye nenkomba ye-Arrows neCurves kuhlangana khona, okukhombisa ukuthi amandla amancanyana azakhela ohlangothini lomkhuba.
Othandwayo Isikhathi Ozimele: 15-ishadi minute
Inkomba ye-BS Trend kufanele iphrinte imigoqo emihle ekhombisa umfutho we-bullish osuselwa ku-RSI.
Isikhombisi se-Arrows ne-Curves kufanele siphrinte umcibisholo okhomba isibonakaliso sokungena kwesikhashana se-bullish.
Vala ukuhweba lapho nje inkomba ye-BS Trend iphrinta ibha engemihle.
Vala ukuhweba lapho nje inkomba ye-Arrows neCurves iphrinta umcibisholo okhomba phansi.
Inkomba ye-BS Trend kufanele iphrinte imigoqo engemihle ekhombisa umfutho we-bearish ngokusekelwe ku-RSI.
Isikhombisi se-Arrows ne-Curves kufanele siphrinte umcibisholo okhomba phansi obonisa isiginali yokungena kwe-bearish.
Vala ukuhweba lapho nje inkomba ye-BS Trend iphrinta ibha enhle.
Vala ukuhweba lapho nje inkomba ye-Arrows neCurves iphrinta umcibisholo okhomba phezulu.
Le ndlela yokuhweba inebhalansi ehlukile phakathi kwesilinganiso se-win ehloniphekile kanye nesilinganiso esikhulu sosengozi.
Iningi lemisebenzi elahlekelwe izodala ukulahleka okuncane ku-akhawunti. Noma kunjalo, ukuhweba okuwinayo kuvame ukukhiqiza izinzuzo ezinkulu. Lokhu kuvumela abathengisi ukuthi benze inzuzo ngokuhamba kwesikhathi.
Izimpawu zesikhashana ezenziwa yizinkomba zombili zivame ukuthembeka kakhulu uma ngabe kuthengiswa kuthathwa kuthathwa indlela eya phambili.
Lezi zindlela ezinhlanu ezethulwe lapha zingasetshenziswa ezimeni zokuhweba ezahlukahlukene. Kunecebo lokubuyiselwa kwesimilo sesikhathi eside, omunye ngokubuyela emuva kwethremu, isu elisebenza ngamasu asunguliwe, isu lokuqhekeka necebo lesikhashana. Isihluthulelo sokwenza inzuzo emakethe ye-forex ekukhonjeni ukuthi iliphi isu okufanele ulisebenzise okwamanje. Lokhu kungakuvumela ukuthi uqongelele ithuba ngalinye elikhona emakethe ezimeni zokuhweba eziningi.
Kahle ubuciko bakho njengomhwebi wosuku futhi uzuze inzuzo engaguquki.
Phezulu 5 Amasu Okuhweba Osuku Lwe-Forex Angcono Kakhulu Asebenzayo iyinhlanganisela ye-Metatrader 4 (MT4) inkomba(s) kanye nesifanekiso.
Phezulu 5 Best Forex Day Ukuhweba Strategies That Work inikeza ithuba ukuthola izici ezihlukahlukene futhi amaphethini intengo Dynamics ezingasaziwa ezingabonakali ngeso lenyama..
Indlela yokufaka i-Top 5 Izindlela ezihamba phambili zokuhweba ngosuku lwe-Forex ezisebenzayo?
Khipha ku-internet Phezulu 5 Amasu Okuhweba Osuku Lwe-Forex Angcono Kakhulu Asebenzayo.zip
Hambisa kwesokudla ukuze ukhethe Phezulu 5 Izindlela ezihamba phambili zokuhweba ngosuku lwe-Forex ezisebenzayo
Uzobona Phezulu 5 Amasu Okuhweba Osuku Lwe-Forex Angcono Kakhulu Asebenzayo ayatholakala eshadini lakho
Isiqephu esedluleI-WoodiesCCI ne-Signal Arrows Forex Ukuhweba Isu
Isihloko esilandelayoUngayisebenzisa Kanjani Ikhalenda Le-Forex Factory nge-Isinyathelo Ngesinyathelo Umhlahlandlela